Kukwidza kunotyisa munhandare dzendege kuchamisa kudzoka kwekufamba nendege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Kukwidza kunotyisa munhandare dzendege kuchamisa kudzoka kwekufamba nendege
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mari yezvivakwa inowedzera $ 2.3 bhiriyoni panguva yedambudziko rinotyisa, anodaro IATA.
Kuwedzera kwakarongwa kwemitero nenhandare yendege uye vanopa masevhisi emhepo (ANSPs) zvinokanganisa kubatana kwenyika.
Yakasimbiswa nendege uye ANSP mhosva yekuwedzera yatosvika $ 2.3 bhiriyoni.
Pamwe chete, ANSPs dzenyika makumi maviri neshanu eEurocontrol nyika dziri kutsvaga kudzoreredza madhora anosvika mabhiriyoni 29 (€ 9.3 bhiriyoni) kubva kunhandare dzendege kubhadhara mari isina kuwanikwa muna 8/2020.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) vakanyevera kuti kukwirwa kwakarongwa kwemitero nenhandare dzendege uye vanopa vanofambisa nendege (ANSPs) vachamisa kudzoka mukufamba nendege uye kukuvadza kubatana kwenyika.
Yakasimbiswa nendege uye ANSP mhosva yekuwedzera yatosvika $ 2.3 bhiriyoni. Kumwe kuwedzera kunogona kuve kwakapetwa kagumi nhamba iyi kana zvikumbiro zvakatomisikidzwa nendege uye ANSPs zvapihwa.
“Mari inosvika mabhiriyoni maviri nezviuru mazana maviri emadhora inowedzera munguva yedambudziko iri inonyadzisa. Isu tese tinoda kuisa COVID-2.3 kumashure kwedu. Asi kuisa mutoro wezvemari wedambudziko reapocalyptic zviyero kumusana kwevatengi vako, nekuda kwekuti iwe unogona, chirongwa chekutengeserana icho choga monopoly chinogona kurota kumusoro. Pakuderera zvachose, kuderedzwa kwemitengo - kwete kubhadharisa mari - kunofanirwa kuve pamusoro pehurongwa hweyendege yega yega uye ANSP. Ndezvevatengi vavo, ”akadaro Willie Walsh, Mutungamiriri Mukuru weIATA.
Chiitiko mune poindi chinowanikwa pakati pevaEuropean air navigation service providers. Pamwe chete, ANSPs yemakumi maviri neshanu eEurocontrol inoti, mazhinji acho ari ehurumende, ari kutsvaga kutora angangoita $ 29 bhiriyoni (€ 9.3 bhiriyoni) kubva kumabhazi endege kubhadhara mari isina kuwanikwa muna 8/2020. uye purofiti dzavakarasikirwa nadzo apo ndege dzakatadza kubhururuka panguva yedenda. Zvakare, ivo vanoda kuita izvi kuwedzera kune 2021% kuwedzera kwakarongerwa 40 chete.
Mimwe mienzaniso inosanganisira:
Heathrow Airport ichimanikidza kuwedzera mhosva neinopfuura 90% muna 2022.
Amsterdam Schiphol Airport ichikumbira kuwedzera mhosva neinopfuura 40% mumakore matatu anotevera.
Airports Company South Africa (ACSA) ichikumbira kuwedzera mhosva ne38% muna 2022.
NavCanada kuwedzera mhosva nemakumi matatu muzana pamakore mashanu.
MuEthiopia ANSP anokwidza mhosva ne35% muna 2021